Xaqqa Buuhoodle Tebayo | hubaalnewspaper
Xaqqa Buuhoodle Tebayo
Waftiga ka socda deegaanka Buuhoodle ee uu hogaaminayo Saleebaan Isse Ahmed (Xaglo-toosiye) waxaa haboon in waxay u qalmaan lagu sooryeeyo. Isweydiintu waxay tahayse maxay u qalmaan? Waftigani maaha marti, mana aha dad laga sooryeynayo waxay iyaguba wax ku leeyihiin, oo ah dalka Somaliland. Waa dadse tabanaya dayac farabadan iyo duudsi siyaasadeed. Wax badan ayaa indhaha laga qarsadey dhibka iyo rafaadka ka taagan gobolada barri ee dalka, gaar ahaana deegaanada hoos yimaada Sool, Sanaag iyo Hawdka Togdheer.
Maanta waxaa horyaala Madaxweynaha Somaliland, Ahmed Mohamed Mohamud (Siilaanyo), fursad siyaasadeed iyo mid qaran oo aad u qaali ah. Fursadani oo kale way yartahay inay soo marto inta uu xilka hayo. Waxaan jeclahay inuusan dayacin tan maanta hortaala.
Dadka dega Buuhoodle waxay tirsanayaan dayac bulsho iyo mid sisaasadeedba. Labadu waa laba arrimood oo midkiiba si isaga u gaara oo ku haboon lagu xalin karo. In badan waxaynu isku khaladnaa labadan arrimood, iskuna deynaa inaynu u helno xal isku mid ah. Madhacayso taasi. Waxaynu ku khasbanahay, si aynaan u dayacin fursadan maanta ina hortaala, inaynu labada kala qaadno, mid walbana sidiisa ula tacaalno.
Aan ku horeeyo dayaca bulsho. Kow iyo labaatankii sanno ee Jamhuuriyadda Somaliland lasoo noqotay madax banaanideedii, taag kastaba dawladu ha lahaatee, maysan dhicin inay marnaba ka hor wareegto dadka ku dhaqan deegaankaas oo ay u kuurgasho xaaladooda nololeed. Ma jiro hal school oo ay wax ku bartaan caruurta deeggaankaasi oo ay dawladu gacanta ku haysaa, ceel biyood oo ay qoday, qashin ay magaalada ka gurtay, ama cid ka tirsan maamulka Somaliland oo meesha joogtaba oo mushahar ku qaata. Dadku waa inaga oo kale. “Af wax cunay xishoo,” ayay Soomaalidu ku maah-maahi jirtay.
Waxaa ka jirra Buuhoodle iyo agagaarkiisa shaqo la’aan baahsan. Waxaan odhan karaa waa mid ka daran ta dadkeena inta badan haysata. Awoodeena dawladeed wey yartahay, laakiin baahida iyo dayaca dadka reer Somaliland ee dega dhulkaas waa wax aynu wax weyn ka qaban karno.
Tabashadda siyaasadeed waa mid iyanna jirta. Marlaybase yaan dad u dhashay dalka lagu duudsiyin cid siyaasiyan u metesha ayaan joogin. Waajibka saaran dawladda waxa uu yahay inay dadkeeda daryeesho mid wax haysta iyo mid aan waxba haysanba, mid buka iyo caafimaad qababa, mid jilicsan iyo mid awood badanba. Hadii uu maanta Ahmed Cabdi (Xaabsade) is casilo, yaan Laascaanood laga jarrin laydha iyo biyahaba. Wax iska khuseeya labada ma jiraan.
Habka democracyga aynu qaadanay ayaan ogolayn inay qolo qolo kale qareen u noqoto. Waxaa ku haboon inay xaqqooda siyaasadeed raadsadaan dadka degaankaas kasoo jeeda. Kursi halasiiyo iyo yaan lasiin toona odhan maayo, laakiin waxaan isleeyahay midd, labba, iyo saddexba xaqbay u leeyihiin maanta. Ta siyaasada intaas ayaan kusoo koobayaa.
Aan u soo laabtoo waftigan maanta jooga Hargeisa. Waa sidatan sida ugu haboon ee uu u fulinayo madaxweynuhu sooryeynta waftigan. Waxaa lasiinayaa waftigan awoodahan hoos ku qoran:
a) Innay dayac tiraan, furaana Cusbitaalka Guud ee degmeda Buuhoodle.
b) Innay dayac tiraan, furaana xaruntii Dawladda Hoose ee degmada Buuhoodle.
c) Innay dayac tiraan, furaana secondary school ay yeelato degmadu hadii aysan hada mid lahayn.
d) Innay dayac tiraan, furaana dhamaan schoolada hoose/dhexe ee ay degmadu hore u lahaan jirtay.
Hadii ay suurtogalayso, waxaa haboon in lasii raaciyo wasiirka waxbarashada iyo wasiirka caafimaaadka. Waxay soo cabirayaan baahida iyo duruufaha ku xeeran iyo waliba xaalada ay ku suganyhiin dhismayaashaas aan rabno inaynu dayactirno oo ubbadkeenu wax ku barto. Waxaa taas garab socda in loo shaqaalaysiiyo dad, marka ay ugu yartahay, gaadhaya 200-400 qof. Shaqaalahaasi waxay u kala shaqaynayaan wasaaradaha kala duwan ee dalka, sida ta caafimaadka, waxbarashada, hawlaha guud, arimaha gudaha, iwm.
Arrintani waxay qabanaysaa laba arrimoodba. Waa mida koowaade, waxay tusinaynaa reer Buuhoodle inay ugu badinayso nabada oo ay qaataan taageeraana kuwa ku dhiiraday. Xertan uu horkacayo Xaglo-toosiyena waxay u yeelaysaa maqaam ay kula gorgortamaan dadkii ay ka yimaadeen, iyaguna guul ayay la laabanayaan. Waa niman, waa siduu hadalka Xaglo-toosiye u yidhi waa horee, wax ka tari kara colaada oo reerka dabb gelinkara, nabadana wax ka tarikara oo qayrkood wax ka soo dhicin kara. Way u qalmaane yaan loo diidin.
Arrinka labaad ee ay wax ka taraysaa waxa uu noqonayaa dadkii deegaanka u dhashay ayaa waxay helayaan fursad ay ku shaqaystaan. Meheradihii magaalada ayaa camirmaaya. Dadkii ayaa kala mashquulaya. Xashiishkii ayaa magaaladda laga gurayaa oo Dawladdi Hoose ayaa shaqaynayasa. Yididiilo ayaa dadkii wada gelaysa. Nin rabba inuu ciyaar fursadaa ku lumiyaana ma jiraayo, xataa kuwa kaasoo horjeeda ee ku diidan.
Su’aashu waxay tahay hadaba xagaynu ka keenaynaa lacagta intaas le’eg ee aynu maanta reer Buuhoodle ku rushaynayno? Waa mid meesha taala oo haboon inaynu is weydiino. Jawaabta oo gaaban ayaa waxay tahay maanta taynu ku bixino ayaa ka badan ta aynu wax muuqda ugu qaban karno. Intaas oo shaqaale ah, intaas oo dayactir ah, iyo hawlo kale oo samafal ah marka lasku soo wada daro, waxay noqonaysaa kharashka ku baxayaa lacag gaadhaysa $35,000-$50,000 bishiiba. Lacagtaas badankeedu waxay dhex joogaysaa dalka, waxaanay abuuraysaa dhaqdhaqaaq dhaqaale oo horseeda korodh miisaaniyayeed. Ka eega dhinaca wanaagsan oo hala arko 400ta ee qof ee shaqo loo abuurayo, daryeelka caafimaad ee dadka oo kor loo qaadayo, nadaafadda oo wax laga qabanayo iyo wixii la mid ahba. Intaas ayaabaanay jirin wax lagu doorsado.
Talodaydu waxay tahay yeynaan sugin inta reer Buuhoodle gaajo, cudur, wax barasho la’aan iyo dayac ka dhamaynayo. Waa dadkeenii ee haloo gurmado dal iyo debedba. Waxa aynu gashanaa waa wax inaga inoo kordhay dhamaan, dhibka reer Buuhoodlena waa boog madow oo dhamaan dalka kuwada taal.
La taliyaha Arrimaha Bulshadda ee Maayorka SeaTac, Washington
← Wasiirkii Hore ee Daakhiliga oo ka Hadlay Heshiiska Nabadaynta, iyo Mustqablkiisa siyaasadeed
Dhoolatuskii cali xoor xoor damanaantii badhasaabka iyo dhoola ka qosolkii cabdale →